မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်အသက်၊ သေခြင်း၊ ဇနီး၊ မိသားစု၊ - ဟောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင်တွေ
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်အသက်၊ သေခြင်း၊ ဇနီး၊ မိသားစု၊
အမည်ပြောင် MJ, ပေါ့ပ်ဘုရင်
အလုပ်အကိုင် အဆိုတော်၊ တေးရေးဆရာ၊ ကချေသည်၊ သရုပ်ဆောင်၊ မှတ်တမ်းထုတ်လုပ်သူ၊ စီးပွားရေးသမားနှင့်ပရဟိတလုပ်ငန်း
ကျော်ကြားသည် 'Thriller', 'Bad', 'Dangerous'
အမြင့် စင်တီမီတာမှာ 175 စင်တီမီတာ
လက်မအတွင်း ၅ '၉'
- ခါး: 28 လက်မ
- Biceps: 13 လက်မ
မွေးနေ့ သြဂုတ်လ 29, 1958
အသက် (သေသည့်အချိန်) အနှစ် ၅၀
သေခြင်းအကြောင်း propofol နှင့် benzodiazepine နှင့်အတူမူးယစ်ကြောင့်နှလုံးရပ်တန့်။
မွေးရပ်မြေ အမေရိကန်၊ အင်ဒီယားနား၊ ဂယ်ရီ။
ရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာ / နေရောင်နိမိတ် ကဗျာ
ဇာတိမြို့ ဂယ်ရီ, Indiana ပြည်နယ်, ယူအက်စ်အေ
အချစ် အယ်လ်ဘမ် - ထိုတွင်ရှိနေရန် (၁၉၇၂)
ရုပ်ရှင် - The Wiz (1978)
မိသားစု ဖခင် - ဂျက်ဆင်ဂျိုး (အမေရိကန်သံမဏိတွင်လက်ဝှေ့သမားဟောင်း)
အမေ - ကက်သရင်းဂျက်ဆင် (Sears မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်)
ညီအစ်ကိုတို့ - ဂျက်ကီ၊ တိုတို၊ ဂျာမန်း၊ မာလာနှင့် Randy ။
ညီအစ်မများ - Rebbie, La Toya နှင့် Janet
ဝါသနာ ဘတ်စကက်ဘော, စာဖတ်ခြင်း
အကြိုက်ဆုံးအစားအစာ ပီစီ၊ ကြက်သား၊ ငါး၊ လတ်ဆတ်သောသစ်သီးများ၊ ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်၊ ကကေးအစများဖြင့် vanilla ရေခဲ၊ နေကြာစေ့၊ glaze donuts၊ နို့နှင့်နှင်းခဲအလွှာများ၊ M & Ms
အကြိုက်ဆုံးအရောင် အနီရောင်၊ အနက်ရောင်၊ အဖြူရောင်နှင့်ရွှေရောင်တို့ဖြစ်သည်
အကြိုက်ဆုံးအဆိုတော်များ ဂျိမ်းစ်ဘရောင်း၊ ဂျက်ကီ Wilson၊ Smokey ရော်ဘင်ဆင်၊ Sammy Davis Jr. The Temptations, Diana Ross
အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်များ 'ပတေရုပန်', 'E.T. ', 'Star Wars'
အကြိုက်ဆုံးသီချင်းများ 'ဆေးရွက်ကြီးလမ်း'၊ 'You My My Sunshine', 'Cloud Nine' သွေးဆောင်မှုအားဖြင့်ဖြစ်သည်
အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်များ James Matthew Barrie က Richard Peter Bach၊ James Oldstone Seagull၊ Ernest Hemingway မှ 'The Old Man And The ပင်လယ်' က 'Peter Pan' ဖြင့် 'Pan'
အကြိုက်ဆုံးတီဗီရှိုး The Stooges သုံးခု၊ Flip Wilson Show၊ Brady Bunch, Road Runner Show, The Simpsons
အကြိုက်ဆုံးမင်းသမီး ဒေါ်ရှယ်လီဘုရားကျောင်း, အဲလစ်ဇဘက်တေလာ၊ ကက်သရင်း Hepburn
အကြိုက်ဆုံးသရုပ်ဆောင်တွေ မော်ဂန် Freeman က, Marlon Brando
အကြိုက်ဆုံးသောက်စရာ ဗာဒံနို့၊ သစ်သီးဖျော်ရည်၊ လိမ္မော်နှင့်မုန်လာဥဖျော်ရည်
အကြိုက်ဆုံးအဆိုတော်များ Michaelangelo, လီယိုနာဒိုဒါဗင်ချီ
အကြိုက်ဆုံး Composer Claude Debussy ('Fawn ၏နေ့လည်ခင်း')၊ Pjotr ​​Iljitsch Tschaikowsky၊ Sergei Sergejewitsch Prokofjew
အဓိကအငြင်းပွားမှုများ မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်အား ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင်ကလေးသူငယ်များအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ အမှုကိုတရားရုံးမှဖြေရှင်းခဲ့ပြီးဖြေရှင်းမှုပမာဏကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ သူ့အားမည်သည့်စွဲချက်မျှမတင်ခဲ့ပါ။
•သူသည်အခြားသောစွပ်စွဲချက်များအပြင် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်ထပ်တူအမှုကိုထပ်မံစွပ်စွဲခဲ့သည်။ တရားရုံးကသူသည်အပြစ်မဲ့မှုအားလုံးကိုစီရင်ချက်ချခဲ့သည်။
MJ သည်ဖျော်ဖြေပွဲများစွာကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီး၊ ၄ င်း၏ပွဲစီစဉ်သူ Marcel Avram အား ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်သူ၏မြူးနစ်ဖျော်ဖြေပွဲကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ခြင်းဖြင့်တရားစွဲခဲ့သည်။ သူသည်သူ၏သူငယ်ချင်းလည်းဖြစ်သည်။ Michael သည်သူအားစွဲချက်တင်ပြီးနောက်နှစ် ဦး စလုံးသဘောတူညီမှုရခဲ့သည်။
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်သည်စွပ်စွဲခံရသည့်တရားစွဲဆိုမှုများတွင်မိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ရာတွင်ငွေအမြောက်အမြားသုံးခဲ့ရသောကြောင့်ကြိုးများ၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာများသို့အဝတ်စုတ်ခြင်း၊ သူ၏ဂီတစာပေများနှင့် ပတ်သက်၍ သူချေးယူခဲ့သောဒေါ်လာသန်း ၂၇၀ ကိုပြန်ဆပ်ရန်သူ့အတွက်ခက်ခဲခဲ့သည်။
• MJ သေဆုံးမှုသည်အငြင်းပွားမှုများကိုပိုမိုအားကောင်းစေသည်။ သူ့မိသားစုကသူအသတ်ခံရသည်ဟုယုံကြည်သည်။ Michael အားမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုဆေးညွှန်းပေးသောဆရာဝန် Conrad Murray အားထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်ချပြီးနောက်တွင်လွှတ်လိုက်သည်။ မိုက်ကယ်ရဲ့အစ်မ LaToya Jackson ကသူဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်လွှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
“ Illuminati” အုပ်စုသည် Dr. Conrad ၏နောက်ကွယ်တွင်အဓိကကျသူဖြစ်သည်ဟူသောပူးပေါင်းကြံစည်မှုများရှိသည်။ ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောစစ်ဆင်ရေးများတွင်ပါဝငျသော '' Star Whackers '' ဟုခေါ်သောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိသည်။
ဖက်ဒရယ်အေးဂျင့်တစ် ဦး ဖြစ်သူရောဘတ်ကော်နက်စ်ကအစိုးရ၏ပါ ၀ င်ပတ်သက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်ပြီးစီမံကိန်း MK ULTRA ၏ Sedgwick သည်လူငယ်နှင့်လူ ဦး ရေကိုဂီတဖြင့် ဦး နှောက်ကိုထိန်းချုပ်ရန်၊ က။ Michael သည် Illuminati နှင့်အထက်စွမ်းအားများသည်အလွန်ထူးကဲသောရည်ရွယ်ချက်ရှိကြောင်းအများပြည်သူသိရှိအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ ကွာရှင်းခြင်း (မသေဆုံးမီ ၁၃ နှစ်)
ရေးရာ / မိန်းကလေး Whitney ဟူစတန်
Lisa ကို Marie Presley
ဇနီး / အိမ်ထောင်ဖက် လီဆာမာရီပရက်စလေ (m 1994-1996; ကွာရှင်း) ။
Debbie Rowe (m ၁၉၉၆-၉၉ ။ ကွာရှင်းထား) ။
ကလေးများ သူတို့က - မိုက်ကယ်ဂျိုးဇက်ဂျက်ဆင်ဂျူနီယာ
သမီး - Paris-Michael Katherine Jackson၊ Prince Michael Jackson II
Net Worth ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ (အကြွေး - ဒေါ်လာသန်း ၅၀၀)
လုံးချင်းအိမ် Neverland Ranch၊ Santa Barbara County, California, California (2676 avres)
ပြင်သစ် Chateau မူလစာမျက်နှာ
ကား Ford ကား၊ Ford Econoline E 150၊ Cadillac Fleetwood၊ GMC V Jimmy၊ Neolann နည်းပြများ၊ Mercedes Benz၊ Chevys Rolls Royce Limousine၊ Sedan Barret၊ Ferrari၊
Michale Jackson သည်ဆေးလိပ်သောက်ခဲ့ပါသလား
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်သည်ပျှမ်းမျှကျောင်းသားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးစာလုံးပေါင်းနှင့်သဒ္ဒါပိုင်းတွင်ဆိုးရွားပြီးဖန်တီးမှု၊ ရှက်တတ်မှုနှင့်အကောင်းဆုံးဝတ်စားဆင်ယင်မှုကိုခံခဲ့ရသည်။
သူ၏ဖခင်သည်မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်အားရိုက်နှက်ခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရတင်းကြပ်စွာနှိပ်စက်ခဲ့သည်။ ဂျိုးကသူသည်ကလေးများကိုရိုက်နှက်လေ့ရှိသည်၊ မိုက်ကယ်အားနှာခေါင်းရှိခြင်းကြောင့်ကဲ့ရဲ့ပြီးသူတို့လေ့ကျင့်နေစဉ်အတွင်းမှန်ကန်မှုမရှိပါကခါးပတ်ဖြင့်ရိုက်နှက်သည်ကိုဝန်ခံခဲ့သည်
မိုက်ကယ်ကသူ့အဖေ၏တင်းကျပ်သောစည်းကမ်းကသူ့အားအောင်မြင်စေသည်ဟုသဘောတူသော်လည်းသူသည်သူ၏အသွင်အပြင်၊ အိပ်မပျော်မှု၊ အိပ်မက်ဆိုးများ၊ အလွန်လိုက်ဖက်သောအပြုအမူနှင့်သူ၏ကလေးအရွယ်လူကြီးတို့နှင့် ပတ်သက်၍ မရေရာမှုများသည်ကလေးကိုမတော်မတရားပြုမှုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့သည်။
၏ဗီဒီယိုတွင်အသုံးပြုသောဝတ်စုံ သည်းထိတ်ရင်ဖို ကနေခဲ့ကြသည် ကယ်တင်ခြင်းတပ်မတော် ။
သူသည်ကလေးငယ်များကိုချစ်မြတ်နိုးခဲ့သည်၊ သူသည်မိမိကိုယ်ကိုလွဲချော်ပြီးကလေးတစ် ဦး အနေဖြင့်သူခံစားခဲ့ရသောအလွဲသုံးစားမှုကြောင့်ဖြစ်သည် သူဝတ်ထားသည့်အနက်ရောင်တီးဝိုင်းသည်ကလေးသူငယ်အလွဲသုံးစားမှုကိုသတိပေးခဲ့သည်။
သူသည်အော်စကာဝယ်ခဲ့သည်! အော်စကာ David O. Selznick အဘို့အဝမ် အကောင်းဆုံးပုံဖြစ်သည် ဘို့ လေရူးသုန်သုန် 1999 ခုနှစ်တွင်။
သူသည် ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင်အော်စကာရှစ်ဆုကိုရရှိခဲ့သည်။
အော် ဒေါ်လာ ၇,၀၀၀,၀၀၀ ကုန်ကျတဲ့ဈေးအကြီးဆုံးဗီဒီယိုဖြစ်တယ်။
သူသည်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များကိုချစ်မြတ်နိုးပြီး python (Crusher),2llamas (Louis & Lola) နှင့်ချင်ပန်ဇီ (Bubbles) ရှိခဲ့သည်။
မိုက်ကယ်သည်သူအတွက်အထူးအသုံးအဆောင်များကိုတီထွင်ခဲ့သည် 'ရှေ့သို့မြှောင်' အဆင့် 'ပြေပြစ်တဲ့ရာဇဝတ်ကောင်'။ The ဖတ်ပါ ခြေလှမ်း MJ အားဖြင့်မူပိုင်ခွင့်။
၉/၁၁ အဖြစ်အပျက်ဖြစ်သည့်နေ့တွင်သူသည်မျှော်စင်အမွှာများ၌တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သူအိပ်နေလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကလွဲသွားတယ်။
Macauley Culkin သည် အိမ်မှာတစ်ယောက်တည်း ကြယ်ပွင့်ကသူ့သားသမီးနှစ်ယောက်၏ခေါင်းကိုင်အဖေဖြစ်သည်။
'Bad' ဗီဒီယို၏ဒါရိုက်တာသည်ကျော်ကြားပြီးဖန်တီးမှုအရှိဆုံး Martin Scorcese ဖြစ်သည်။
ဝီကီပီးဒီးယား, Twitter နှင့် AOL ၏ Instant Messenger သည် MJ ကွယ်လွန်သည့်နေ့လည်ပိုင်းတွင်ပျက်ကျခဲ့သည်။
သူကစာသားဘုရင်တစ်ပါးပဲ! သူ့အားတော်ဝင်ဘွဲ့ပေးခဲ့သည် Goban အိုင်ဗရီကို့စ်ရှိကျေးရွာတစ်ရွာ။
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်သည်သူ၏အစ်ကိုများနှင့်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည် ဂျက်ကီ၊ တိုတို၊ Jermaine နှင့် Marlon၊ အဖြစ် ဂျက်ဆင်5။ မိုက်ကယ်ဟာတစ်ကိုယ်တော်မစခင်သူ့အစ်ကိုနဲ့စတင်သီဆိုခဲ့တယ်။
MJ ရဲ့ သည်းထိတ်ရင်ဖို Billboard Hot 100 စာရင်းတွင်နံပါတ်တစ်အရေအတွက်ကိုထိစေသောပထမဆုံးအယ်လ်ဘမ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Thriller သည်အချိန်ကာလ၏ရောင်းအားအများဆုံး album ဖြစ်ပြီး ၆၅ သန်းကျော်ရောင်းချခဲ့သည်။
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်သည်အကကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည် M နင် သူသည်သူ့ဟိုတယ်အပြင်ဘက်ရှိလမ်းပေါ်ရှိအကသမားများထံမှငွေထုတ်ချေးခဲ့သည်။
Guinness World Records ကသူ့ကိုသရဖူဆောင်းခဲ့တယ် အားလုံးအချိန်အများဆုံးအောင်မြင်သောဖျော်ဖြေရေး။
MJ ကိုနှစ်ကြိမ် inducted ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Fame ၏ရော့ခ်နှင့် Roll ခန်းမ ။ သူသည်ရော့ခ်နှင့်ပေါ့ပ်အမျိုးအစားမှတစ်ခုတည်းသောအနုပညာရှင်ဖြစ်သည် Fame ၏အကခန်းမ ။ သူကတစ် ဦး inductee ဖြစ်ပါတယ် သီချင်းရေးဆရာ၏ခန်းမ အရမ်း။
ဂင်းနစ်ကမ္ဘာ့စံချိန်များထဲမှတစ်ခုထက်မကသောမိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်လည်းရှိသည် ၁၃ ဂရမ်မီ ရန် ဂရမ်မီဒဏ္Awardာရီဆု နှင့်က ဂရမ်မီတစ်သက်တာဆု ။
သူ၌အမြင့်ဆုံးအရေအတွက်ရှိသည် အမေရိကန်ဂီတဆုများ နံပါတ်တစ် Billboard Hot 100 (ထိပ်ဆုံးရာထူး ၁၃ ခု) ။ သူလည်းလက်ခံရရှိခဲ့သည် ရာစု၏အနုပညာရှင် ချီးမြှင့်။
The Pop of the King သည်အယ်လ်ဘမ်သန်း ၄၀၀ ကျော်ရောင်းချခဲ့သည်။
သူသည် Billboard တွင်ထိပ်ဆုံး ၁၀ နေရာဝင်ခဲ့သည် ငါးနှစ်ဆက်တိုက် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်သူ၏“ Love Never Felt Good” သီချင်းနှင့်အတူဤသမိုင်းမှတ်တိုင်အောင်မြင်ရန်ပထမဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
MJ ပိုင်ဆိုင်သည့်ဂင်းနစ်စံချိန်သည်ပရဟိတလုပ်ငန်း (၃၉) ခုအတွက်ထောက်ပံ့မှုစံချိန်ဖြစ်သည်။ အခြားမည်သူမျှထိုကဲ့သို့သောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုပြသခဲ့သည်။
မိုက်ကယ်သူဆိုလိုသည်မှာသူ၏နှာခေါင်းနှင့်မေးစေ့ဘို့ပလပ်စတစ်ခွဲစိတ်နှစ်ခုသာရှိခဲ့ပါတယ်ကပြောသည်။ သူကသူတို့နှစ် ဦး စလုံးကျန်းမာရေးအခြေအနေများအတွက်ခဲ့ကြသည်ဆိုပါတယ်။ သူ၏နှာခေါင်းသည်ရှုပ်ထွေးသောအကအခုန်ပြောင်းရွှေ့မှုကိုလေ့ကျင့်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုသူကရှင်းပြသည်။ သူ၌ခွဲစိတ်ကုသမှုများစွာရှိသည်ဟုယုံကြည်ရသည်။
New Orleans ကက်ထရီနာဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်သည့်အခါ MJ သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာမြှင့်တင်ရန်သီချင်းတစ်ပုဒ်ထုတ်မည်ဟုကတိပေးခဲ့သည်။ သူသည်အခြားအနုပညာရှင်များနှင့်အတူစီမံကိန်းတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။
သူ့ကိုယ်ရံတော်ကလူတွေကမိန်းကလေးတွေကိုသူတို့မှာခွေးတစ်ကောင်ရှိတယ်ဆိုတာပြောပြီး MJ က“ ငါမှာတိရစ္ဆာန်ရုံရှိတယ်” လို့ပြောခဲ့တယ် သူ့မှာတိရစ္ဆာန်ရုံရှိတယ် Neverland Ranch ဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံအပြင်၌။
တစ်ချိန်ကသူသည်တစ်ပတ်ရစ်စာအုပ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုတွေ့ပြီးဒေါ်လာ ၁၀၀,၀၀၀ ဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့ပြီးစာအုပ်များကိုသူ့အိမ်သို့ယူဆောင်လာခဲ့သည်။
သူသည်နိုင်ငံခြားမှမိန်းကလေးများနှင့်လျှို့ဝှက်ရေးရာနှစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသူတို့ကိုဖုန်းဆက်ခဲ့သည် သူငယ်ချင်း နှင့် ပန်း ။ သူ၏ကိုယ်ရံတော် မှလွဲ၍ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမျှသူတို့မသိခဲ့ပါ။
MJ သည်သူ့မိခင် မှလွဲ၍ မိသားစုမှမည်သူနှင့်မျှတွေ့ဆုံခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ သူမသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုလဲကျလိမ့်မည်၊ သူသည်သူ့ကိုကြိုဆိုလိမ့်မည်။ တံခါးဝမှလုံခြုံရေးကိုရှင်းလင်းနိုင်လျှင်ပင်သူ၏မောင်နှမများပြန်လာကြလိမ့်မည်။
MJ သည်ရေဒါအောက်တွင်အမြဲရှိနေပြီးသူသည်ဟိုတယ်တွင်သူနေထိုင်ခဲ့သည့်အခန်းကိုစစ်ဆေးရန်သူ၏ကိုယ်ရံတော်များရှိလိမ့်မည်။ သူ bugging အားဖြင့် bugged ခဲ့သည်။ ဒါဟာအကြောက်လွန်ရောဂါမဟုတ်ခဲ့, သူ၏အစ်မနှင့်စကားပြောခဲ့သည်ကိုသူမသိဘဲမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပြီးမီဒီယာသို့ရောင်းချခဲ့သည်။
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်သည်သူ၏ကိုယ်ရံတော်များက FBI ၀ င်ရောက်စီးနင်းရန်အတွက်လုံလောက်သောသေနတ်များသယ်ဆောင်လာသောအခါသူ၏ဘဝကိုအလွန်စိတ်ပူနေပုံရသည်။ သူတို့နှင့်အတူလက်နက်ကိုင်ခဲ့ကြသည် semi-automatic Glock ပစ္စတို၊ Teasers (၁.၂ သန်း Volts)၊ MP5 (အပြည့်အဝအလိုအလျောက်စက်သေနတ်များ)၊ စစ်တပ်ပုံစံ AR15 နှင့် 12-gauge အလိုအလျောက်သေနတ်များ။ သူတို့ကမဂ္ဂဇင်းတွေတိုးချဲ့ပြီးကျည်ဆံ ၃၀၀၀ လောက်ကိုဖြန့်ဝေခဲ့တယ်။
သူသည်ဘာရိန်းရှိဘာရိန်းသို့ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်သူ၏ကလေးအလွဲသုံးစားပြုမှုဖြင့်ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရသည်။
မိုက်ကယ်သည်တာ ၀ န်ရှိသောဖခင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူ၏ကလေးများအားအိမ်တွင်ကျောင်းထားခဲ့ပြီး၊ သူတို့ကျောင်းထားရန်အခန်းပေးထားသည်။ ပုဂ္ဂလိကကျူရှင်ဆရာမသည်နံနက် ၈ နာရီတွင်စာသင်ခန်းများစဖွင့်ပြီးကလေးများသည်ယူနီဖောင်းများဝတ်ဆင်ရသည်။ သူကဆရာနှင့်စကားဆက်ပြောပြီးကလေးများကိုအိမ်စာနှင့်ကူညီသည်။ သူတို့လေ့လာသိရှိထားတာတွေကိုစစ်ဆေးဖို့သူတို့ကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့တယ်။
MJ ၏အမေသည် Clarinet နှင့်စန္ဒရားတီးတတ်ပြီးတိုင်းပြည်အနောက်ပိုင်းအနုပညာရှင်ဖြစ်ချင်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင်သူ၏ဖခင်သည်တေးဂီတနှင့်မတူ၊ စွန်ငှက်, ဒေသခံရစ်သမ်နှင့်အပြာရောင်တီးဝိုင်း။
သူသည် download တစ်သန်းရောင်းသည့်ပထမဆုံးအနုပညာရှင်ဖြစ်သည်။
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ရဲ့အသံဟာယောက်ျားလေးအတွက် soprano အထိမြင့်တက်လာတယ်။
ဒါဟာ MJ ၏ဟောလိဝုဒ်လမ်းလျှောက်အပေါ်ကြယ်ပွင့်ရှိကြောင်းအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
Billy Jean MTV မှာထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့လူမည်းတစ်ယောက်ရဲ့ပထမဆုံးဗီဒီယိုဖြစ်တယ်။
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်သည်သူကဲ့သို့တံပိုးမှုတ်သည်ဟုခံစားမိသည် Minnie မောက်စ် သူကသူ့အဟောင်းကိုဂီတကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာ။
သူသည်ခေါင်းကိုင်ဖခင်ကြီးဖြစ်သည် Lionel Ritchie ရဲ့ သမီး နီကိုးလ် နှင့် ပျား Gees အဆိုတော် Barry Gibb ရဲ့ သူတို့က မိုက်ကယ် ။
သည်းထိတ်ရင်ဖို 122 ပတ်ကြာ Billboard 200 မှာနေခဲ့တယ်!
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်သည်မီဒီယာများမှသတင်းရင်းမြစ်အားလုံးကိုဖြတ်တောက်ပစ်ခဲ့သည်။ သတင်းစာမရှိ၊ ကေဘယ်တီဗီနှင့်အင်တာနက်လည်းမရှိပါ။ သူက The Wall Street Journal ကိုသာဖတ်ခဲ့တယ်၊
ရဲကသူ၏ Neverland Ranch ကို ၀ င်ရောက်စီးနင်းပြီးနောက်သူသည်ဘယ်သောအခါမှအိမ်သို့ ပြန်၍ နေ၍ မခံစားရတော့သောကြောင့်ထိုနေရာသို့ဘယ်တော့မှ ပြန်၍ မသွားနိုင်တော့ပါ။ MJ နှင့်သူ၏ကလေးများသည်ဟိုတယ်များတွင်နေပြီးနေအိမ်များကိုငှားကြသည်။ စီးနင်းမှုအပြီးသူဘာမှမထိခဲ့ပါဘူး။
MJ နှစ်ယောက်ကိုချီးမြှင့်ခဲ့သည် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဒီဂရီ။ တစ်ခုမှာ Humane ပေးစာ၏ဂုဏ်ထူးဆောင်ပါရဂူဘွဲ့ မှ ယူနိုက်တက် Negro ကောလိပ်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ နှင့်အခြားဖြစ်ခဲ့သည် Humane ပေးစာ၏ဂုဏ်ထူးဆောင်ပါရဂူဘွဲ့ မှ ငါးတက္ကသိုလ်။
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်၏အသုဘကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလူပေါင်း ၂.၅ ဘီလီယံကစောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။
arjun kapoor ကမိခင်သူသည်
Atg kapoor bigg သူဌေးကစကားသံကို
Tamil မင်းသား chiyaan vikram သား
sandeep maheshwari ၏ဘဝပုံပြင်
မွေးနေ့၏ rakesh roshan